Ganacsade isku dilay Koonfur Afrika kadib amaro la dul dhigay
February 13, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
NAIROBI(P-TIMES)- Muddooyinkii dambe waxaa isa soo tarayay weerarka lagu hayo goobaha ganacsiga ee ay leeyihiin Ajaanibta ka shaqeysata gudaha magaalooyinka waaweyn ee dalka Koonfur Africa iyo qaar kamid ah gobolada dalkaas.
Burcadda Koonfur Afrikaan ka ah ayaa caadaystay weerarada goobaha ganacsiyada oo dhac u gesta inta badana sameeyay weeraro dhiig uu ku daato oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac lagula kaco ganacsatada Ajaanibta ah ee ay ku jiraan Soomaalida.
Ganacsatada Koonfur Africa ayaa sheegay in ay arkeen dhacdo ay aad uga argagaxeen kadib markii ay arkeen ganacsade Itoobiyaan ah oo goobtiisa ganacsi isku daldalay, kadib markii Boolisku ay ku amreen in uu xiro goobtiisa ganacsi sida ay sheegeen.
Muuqaal laga soo qaday ayaa muujinayay ganacsadaha oo xarig ku xirtay goobtiisa ganacsi kadibna qoorata gashaday isaga oo sidaas ku geeriyooday,qaar ka mid ah Soomaalida ka ag dhawaa oo ku baxay ayaa sheegay in ay aad ula yaabeen dhacdadaan kuna wargeliyeen Booliska.
Ganacsatada ayaa inoo xaqiijiyay in dhacdadani ay ka dhacay gobolka Gauteng mawaadin Itoobiyaan ka ahna uu isku daldalay kadib markii lagu amray in uu xiro goobtiisa ganacsi taas oo u cuntami waysay kana door biday in uu is dilo.
Inta badan dalka Koonfur Africa ayaa waxaa laga soo weriyaa weeraro khasaaro geysta oo Burcad Koonfur Afrikaan ah kula kacaan Soomaalida iyo qaar kale oo ka mid ah Ajaanibta kale ee ganacsiyada ku leh gudaha dalka Koonfur Africa.
DAAWO-Olole aysan dad badan ku faraxsanayn oo Garoowe ka bilowday.
DAAWO-Mas’uul katirsan Puntland oo jimicsi ku samaynaya xeebta Qandala hanjabaadna u diray Daacish.
DAAWO: Oohinta shacabka Garoowe, wax ka qabasha la’aanta Puntland & halis soo wajahan haddaan laga hortegin.
DEG DEG-Puntland oo digniin culus soo saartay & cabsi ka taagan deegaamada qaar.
DEG DEG-Sucuudiga oo ku dhawaaqay shuruudo cusub oo lagu cumraysanayo & xilliga Soomaalidu aadi karaan oo la ogaadey.
Ciidanka xoogga Soomaaliya oo duulaan culus qaaday lana wareegey saldhigyadii..
DAAWO FAAQIDAAD:Doorashada Soomaaliya, Awoodsiinta maamulada iyo wiiqista awooda odayaasha.
Awooddii golaha shacabka oo la wareegey & xildhibaano sheegay inaysan go’aan lahayn.
AKHRISO: Boqorka Beelaha Daarood oo ka hadlay Geeridii Boqorkii Kuwait, Fariin-na u diray Soomaalida.
DAAWO-Muuse Biixi oo maanta u soo jawaabey Madaxweyne Farmaajo,”Shanta madaxweyne ee Xamar Jooga midnimo ma ogola”.
Xiisad u dhexaysa Puntland iyo Somaliland oo laga dareemayo Tukaraq & Somaliland oo ciidamo soo dhoobtay
Sawirro-Somaliland oo Taangiyo iyo hub culus soo dhoobtay Sool una hanjabtay Puntland